Ukuthumela Kwangaphandle - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
I-JERA fiber inikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo enhle kumakhasimende.
Lokho esikukhathalelayo akuyona kuphela ikhwalithi yemikhiqizo, kepha futhi nesimo semikhiqizo ngemuva kokuthunyelwa kanye nokuthuthwa kwesandla sesi-3. Ikakhulukazi ngokuthunyelwa kwe-LCL, Kungaba nokuhamba okuningi ngaphambi kokuba izimpahla zifike lapho ziya khona, futhi uhlelo lwethu lwangaphakathi lokupakisha luyakwazi ukuqinisekisa ukuthi iphakethe liqinile ngokwanele ukugwema noma yikuphi ukonakala kwemikhiqizo ngesikhathi sokuhamba.
Sizosiza amakhasimende ethu ukuthola izindlela zokupakisha ezisebenza kahle kakhulu nezifanele ngesikhathi sezingxoxo zokuthengwa kokuthengwa, okuzobasiza ekongeni izindleko zabo.
Imvamisa sinikeza amakhasimende ethu izindlela zokupakisha ezilandelayo:
1.ikhwalithi ephezulu Carton. Le ndlela yephakeji ivame ukusebenza lapho upakisha imikhiqizo yesisindo esincane njengekhebula le-fiber optic, ukulahla ikhebula ngocingo, amabhokisi okusabalalisa we-fiber optic njll
2.Ikhwalithi ephezulu ye-Carton kanye nesikhwama se-poly. Le ndlela yephakeji ivame ukusebenza ekupakisheni imikhiqizo esindayo njengamabhande wensimbi engagqwali, amabhakede ensimbi angenasici, amandla aphakathi nendawo nezinsimbi ezinamandla amakhulu, ibhawodi yensimbi noma amabakaki.
Ama-pallets enziwe ngokwezifiso. Amanye amakhasimende acela amaphalethi ukuletha imithwalo yawo lapho enza i-LCL noma i-FCL. Le ndlela yephakeji isebenza ekupakisheni imikhiqizo ekhanyayo efana nokufakwa kwamandla kagesi we-ABC aphansi, izixhumi zokubhoboza ezifakwa ngci, izintambo zekhebula, izesekeli zekhebula le-FTTH nokunye.
4.Wooden amabhokisi. Ifakelwe insimbi esindayo kakhulu ekubunjweni noma kokufakwa kokuzihlanganisa. Njengesokhethi iso, i-clevis, i-ball eye guy grips njll.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane! Uzothola uhla lokuncintisana lwemikhiqizo ye-FTTX ngekhwalithi ephezulu, ukulethwa okusheshayo kanye nensizakalo enhle evela kwaJera.